Konke Odinga Ukukwazi Nge-CBD Tincture. | Okuhle kakhulu kwango-2022
Konke odinga ukukwazi mayelana CBD Amafutha.
Imiphumela ye-tincture ye-cannabis
Izithako ze-CBD zidume ngobuhlungu obungapheli. Zilula ukuzisebenzisa, zihlala isikhathi eside, futhi ziyashesha ukuqala ukusebenza. I-CBD tincture ingasetshenziswa ngaphansi kolimi ngaphansi kwezilimi. I-CBD imuncwa ngokushesha ulwelwesi lwamafinyila emlonyeni bese iyiswa egazini. I-tincture ye-CBD iyashesha ukusebenza futhi inomthelela obonakalayo. Lawa mafutha awabizi futhi kulula ukuwenza.
Yize kunezinzuzo eziningi ku-CBD tincture yengcindezi nobuhlungu, akuwona wonke umuntu owazi ukuthi isebenza kanjani. Abantu abanobuhlungu obungapheli bayelulekwa ukuthi basebenzise izithako ze-CBD. Ababangeli ukuphakama. I-tincture isebenza ngendlela ehlukile ku-THC eyaziwa ngokubangela ukuphazamiseka kwengqondo. Kufanele uzizwe uzolile futhi ukhululekile ngemuva kokuthatha i-CBD tincture.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi ama-tinctures enziwe ngotshwala anganambitha okubabayo. Ziqukethe utshwala obungama-60-70%. Ukufihla ukunambitheka okubabayo, abakhiqizi basebenzisa amafutha emifino kanye nama-sweeteners. Ama-tinctures angagcinwa isikhathi eside. I-CBD tincture ingasetshenziselwa ukwelapha ubuhlungu noma ingcindezi.
Ubufakazi busikisela lokho Izithako ze-CBD ingase ibe nezinhlobonhlobo zezinzuzo zezempilo. Ucwaningo ngale mikhiqizo lunqunyelwe. Ngaphambi kokuba uqale noma yiluphi uhlobo lwemithi yokwelapha entsha, kungcono ukubonana nochwepheshe bezempilo. Ungathola ulwazi oluwusizo kubo mayelana nendlela yokunquma inani elilungile le-CBD kuwe nokuthi yisiphi isithako somthamo. Ngaphambi kokuthi uqale ukusebenzisa i-tincture ye-CBD, kuwumqondo omuhle ukufunda ngemiphumela emibi.
Imiphumela ye-CBD tincture ye-CBD iyabikezelwa. Iconsi elilodwa le-tincture lingamuncwa umzimba emizuzwini eyi-15. Ungathola ukuthi isebenza ngokushesha kunanoma iyiphi enye i-CBD. Kungcono ukuthi ungayithathi i-tincture ngaphambi kokuba uqiniseke ukuthi uzozuza kuyo. Ukuhlola ukuthi ama-tinctures e-CBD anemiphumela emihle yini ebuhlungu, kufanele uthathe i-tincture eyodwa ye-CBD ngosuku.
Imiphumela ye-tincture ye-CBD iyahlukahluka kuye ngokugxila. I-tincture ye-CBD esekwe etshwaleni ibaba kakhulu kuneyenziwe ngemifino ye-glycerin ne-ethanol. Uma ungafuni ukuzwa noma yimiphi imiphumela emibi, kungcono ukungasebenzisi i-tincture. I-CBD tincture ingakwazi ukunciphisa izimpawu zokudangala kwezinye izimo. Ingasetshenziswa futhi ukukhulula ubuhlungu.
Izinzuzo ze-cannabis tincture
Izinzuzo eziningi zezempilo ziye zafakazelwa izifundo ezimayelana nowoyela we-CBD. uwoyela CBD kungasiza ukuthuthukisa impilo yenhliziyo yakho ngokwehlisa umfutho wegazi nokwandisa ukujikeleza kwegazi. Ingakusiza ngezinduna ngokuvimbela uketshezi olunamafutha ukuthi lungakhiqizi. Ingasiza futhi ezigulini ze-glaucoma ngokusiza ukulawula ushukela wegazi nomfutho wegazi. Lena inzuzo eyodwa kuphela kawoyela we-CBD. Funda kabanzi mayelana ne Izinzuzo zamafutha e-CBD lapha.
Abantu abaningi banenkinga yokuqwasha. Kungathinta impilo yakho engokwengqondo nengokomzimba futhi kubangele isifo sikashukela kanye nokudangala. Uwoyela we-CBD ungasiza ngokuqwasha futhi uthuthukise izinga lokulala. Imiphumela kawoyela we-CBD kuma-serotonin receptors ingakusiza ukuthi ulale kangcono futhi ulawule izimpawu eziningi ezihambisana nokuqwasha. Uwoyela we-CBD uboniswe ukuthi unezinzuzo eziningi ezimweni ezahlukene.
I-serotonin ye-neurotransmitter, elawula imizwa nomoya, ibalulekile ekulawuleni imisebenzi yomzimba. Amazinga aphansi ale hormone angaholela ekukhathazekeni nasezinkingeni zokulala. I-Serotonin, ihomoni yokuzizwa kahle, ilawula umfutho wegazi, ukujikeleza kwegazi, nokuncipha kwesisindo. Lezi zimo zingenza i-CBD ibe yindlela yokwelapha ebalulekile. Futhi inamandla okwelapha izimo zemizwa.
Ngokusho the World Health Organization (WHO), ukudangala nokukhathazeka yizona zimbangela eziphambili zokukhubazeka. Le mithi iphumelela ngokwedlulele, kodwa ingaba nemiphumela engemihle njengengozi eyandayo yokuba umlutha, ukuncipha komdlandla wobulili, ukungasebenzi kahle kwengqondo, nokuncipha kokuthanda ucansi. Eminye imishanguzo yasekhemisi ingase ibangele nokusebenzisa kabi izidakamizwa. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-CBD ibonise ukuthi inciphisa kakhulu izimpawu ze-bipolar disorder. Lesi isinyathelo esithembisayo esibheke ekwelashweni kokukhathazeka nokudangala.
Isifo se-bipolar sithinta abantu baseMelika abangaphezu kwezigidi ezi-5. I-bipolar disorder yisimo sobuchopho esiyivelakancane esidala iziqephu ze-high-manic kanye neziqephu zokucindezeleka. Kungase kunciphise kakhulu kuzo zombili izimo. Kuye kwafakazelwa futhi ukuthi yehlisa ingozi yokuhluleka kwenhliziyo. Kuye kwaboniswa futhi ukunciphisa ama-muscle spasms. Imiphumela ye-CBD ayisebenzi nje kubantu. Imiphumela emihle ye-CBD iye yabonakala inenzuzo ezilwaneni.
Uwoyela we-CBD kukholakala ukuthi uyakwazi ukwelapha i-bipolar disorder. Ilwa nokuvuvukala futhi inciphisa ukukhiqizwa kwe-sebum. Inenzuzo ezimweni eziningi zesikhumba. Lezi zifundo ezikhuthazayo zizosivumela ukuthi sibone umthelela we-CBD kuhlu olubanzi lwabantu. Njengoba ucwaningo olusha lushicilelwa, izinzuzo zezempilo ze-CBD zizokhula kuphela. Abantu bangahlushwa ukuphazamiseka kwengqondo.
I-tincture ye-cannabis yobuhlungu
Nakuba insangu isisemthethweni iminyaka engaphezu kuka-100, namanje akukho emthethweni ukuyithenga ngaphandle kwekhawunta. Nokho, usengakwazi ukuyithenga. Ezinye izifundazwe zize zivumele, njengeMassachusetts. Kusemthethweni kwezinye izifundazwe, kubandakanya neMassachusetts. Awukwazi ukuphakama kukho. Lokhu kuyinzuzo uma ufuna ukugwema ukucwaswa okuhambisana ne-cannabis. I-CBN kanye nowoyela we-CBD yiwo amaningi ama-tinctures athandwayo. Zombili ziqukethe ama-cannabinoids asebenzayo. Ungajabulela impilo yakho ngaphandle kokwesaba ngokusebenzisa inhlanganisela ekhethwe ngokucophelela yama-terpenes.
Kufanele ujwayelane nama-cannabis tinctures kanye nemiphumela yawo ebuhlungu ngaphambi kokuwathenga. Ama-tinctures ahlukene anamanani ahlukene e-THC ngakho-ke udinga ukutholela okungcono kakhulu. Ama-tincture we-THC angatholakala kuma-dispensaries. Banomthamo ocacile futhi basebenza ngokushesha. Ingadliwa iyodwa noma ixutshwe nokunye ukudla. Akufanele uyisebenzise ngaphandle uma unencwadi kadokotela.
Kunezinzuzo eziningi ze-cannabis tincture yobuhlungu. Ukudambisa izinhlungu, ungasebenzisa i-tincture ye-THC ngokungemthetho esimweni esingamahlalakhona. Lokhu kuyindlela yokwelapha esheshayo nengokwemvelo esebenza kahle kulabo abafuna inketho yemvelo. Ama-tinctures e-THC angaba inketho enhle kulabo abasanda kuthola insangu noma abangafuni ukulinda imishanguzo etholakala ngaphandle kwekhawunta.
Umuthi kadokotela awudingeki ku-cannabis tincture. Ungasebenzisa i-tincture yezifo eziningi, kuhlanganise nezinhlungu ezithambile nokuqina. Izinzuzo zokuthakwa kwensangu zinamandla kunalokho ongacabanga, njengoba enziwa ngensangu evunwa ngokuqhubekayo. Imikhiqizo efakwe insangu ayinawo amakhalori aphezulu kanye noshukela njengezinto ezidliwayo.
Enye inzuzo ye-cannabis tincture, ngaphandle kwezinzuzo ze-THC, amandla okulawula umthamo. Le mikhiqizo ingalawulwa ngendlela ewuketshezi ukuze ukwazi ukulungisa umthamo ukuze uvumelane nezidingo zakho. Uma ungafuni ukubeka engcupheni ukuphakama kwe-THC tinctures, unganamathela nge-tincture eyenziwe nge-cannabis ekhule ngokuqhubekayo.
Okuthandwayo kwakho kuzonquma ukuthi kufanele usebenzise i-cannabis tincture ukwelapha izinhlungu noma cha. I-high-THC uhlobo olungcono kakhulu lokukhulula ubuhlungu. I-tincture ye-CBD ingasetshenziswa ukukhulula ubuhlungu. Kuyindlela emangalisayo yokukhulula ubuhlungu futhi kungokwemvelo 100%.
I-tincture ye-cannabis yomdlavuza
Ucwaningo lwakamuva ngamafutha e-cannabis nomdlavuza lubonise imiphumela ethembisayo. UBill Wilkins, umenzi wefilimu, akazange azame ukufihla izici ezingezinhle zikawoyela we-cannabis. Iziguli eziyisithupha azizange ziyithole imiphumela emihle. Uphinde akhombise ukuthi ungakwenza kanjani eyakho ukwelashwa komdlavuza osuselwe kwi-cannabis. I-athikili engezansi iqukethe ulwazi mayelana nemikhiqizo emithathu eyaziwa kakhulu. Funda kabanzi mayelana nezinzuzo zamafutha ensangu ekulawuleni izimpawu ezihambisana nokwelashwa komdlavuza.
Ama-cannabinoids kuwoyela we-cannabis angasetshenziswa ukwelapha iziguli ezinomdlavuza. Amafutha angasiza ngokucanuzela kwenhliziyo, ukukhathala nokuvuvukala. Iphinde icindezele amasosha omzimba. Isetshenziswe ezinye iziguli ukwelapha imiphumela emibi ye-chemotherapy. Ingase futhi isetshenziselwe ukunciphisa isicanucanu nobuhlungu obuhambisana nokwelashwa ngamakhemikhali. Leli khambi alizuzisi iziguli ezinomdlavuza kuphela. Kubikwa ukuthi isisize abantu abaningi ngezimpawu zabo.
Imfanelo Umkhiqizo we-CBD kufanele inikeze izinzuzo eziningi ezigulini ezinomdlavuza. Kufanele iqukathe wonke ama-cannabinoids nama-terpenes kanye nama-flavonoid nama-fatty acids. Ungayisebenzisa ngokuphepha uma ingenazo izibulala-zinambuzane. Lokhu kwelashwa kwemvelo nakho kunezinye izinzuzo eziningi. Kunconywa kakhulu ukuthi uthintane nodokotela wakho ngaphambi kokusebenzisa lokhu kwelashwa kwemvelo.
Iziguli ezinomdlavuza zisebenzise amafutha ensangu ukwelapha imiphumela engemihle ngemuva kokwelashwa ngamakhemikhali. Ama-cannabinoids kuwoyela we-cannabis angasiza ngesicanucanu, ukuhlanza, ukukhathala nokuvuvukala. Angakwazi futhi ukucindezela amasosha omzimba. Amafutha ensangu angasiza nasekulahlekelweni yisifiso sokudla, okungase kubangelwe ukwelapha ngamakhemikhali. Le miphumela engemihle ingaba mnandi kakhulu kangangokuba abantu abaningi baphendukela kuwoyela we-cannabis ukwelapha umdlavuza.
Idokhumentari yakamuva mayelana ne-cannabis nomdlavuza ikhombisile ukuthi ama-cannabinoids ku-cannabis ayazuzisa ezigulini ezinomdlavuza. Lokhu kwelashwa sekusetshenziswe amashumi eminyaka ukwelapha iziguli ezinomdlavuza. Isetshenziswa kakhulu ku-chemotherapy ukunciphisa imiphumela emibi evela ku-chemo. Ucwaningo selukhombisile nokuthi uwoyela we-cannabis uqukethe ama-cannabinoids, angaba yinzuzo ezigulini ezinomdlavuza. Ucwaningo olwenziwe e-UK lwathola ukuthi uwoyela we-hemp ungelapha uhlobo oluthile lwe-leukemia.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi uwoyela we-cannabis unganikeza impumuzo ezigulini ezinomdlavuza ezihlushwa yimiphumela emibi kanye nokungakhululeki. Ingasetshenziselwa ukwelapha izimpawu zomdlavuza kanye nemiphumela engemihle evela ku-chemotherapy. Akukabi yikhambi lazo zonke izinhlobo zomdlavuza. Kufanele ukuthathe kuphela njengesengezo hhayi ngaphansi kweso likadokotela. Kufanele uthintane nodokotela wakho kulokhu.
Imiphumela emibi ye-tincture ye-cannabis
Abantu abaningi banelukuluku lokwazi ngemiphumela emibi kawoyela we-cannabis. Uma nje uwoyela usumuncwe kahle, kuphephile ukuwasebenzisa. Abanye abantu bangase bangezwani nowoyela. Ziningi izinzuzo ezingaba khona. Inzuzo enkulu yamafutha e-cannabis amandla ayo okuthuthukisa impilo yenhliziyo. Inganciphisa i-cholesterol futhi ikhulise ukukhiqizwa kwama-antioxidants avikela ukwakheka kwama-radicals mahhala. Kungavikela nobuchopho ekushayweni, okungase kubangele ukuphazamiseka ekuxhumaneni kobuchopho nomzimba.
Amafutha ensangu anemiphumela emibi kanye nezinzuzo eziningi. Uma ithathwe ngamanani amakhulu, ingabangela imiphumela emibi. I-THC ivimbele i-enzyme ebhekele ukwakheka kwe-amyloid plaque, ebangela ukufa kwamangqamuzana obuchopho kanye ne-Alzheimer's. Okuqukethwe kwe-THC emafutheni ensangu kuphinde kuvimbele ukwakheka kwe-amyloid plaque ebuchosheni. Lokhu kungaholela emiphumeleni emibi. Kungasiza futhi ukuvimbela ukulimala kwe-macular ngokuthuthukisa ukusebenza kwamehlo akho.
Uwoyela wensangu awugcini nje ngokudambisa izinhlungu kodwa ubuye wabonakala ewusizo kulabo abaphethwe yisifo sikaParkinson. Amafutha anothile ngama-cannabinoids anamathela ezinzwa futhi anciphise ukundindizela. Kuyaziwa futhi ukuthuthukisa amakhono emoto amahle futhi kunciphise ukuvuvukala. Kungakusiza futhi uphumule futhi ulale. Kukhona futhi imiphumela emibi engaba khona kuwoyela we-cannabis.
Nakuba ezinye side effects of uwoyela we-cannabis kungase kungabonakali, ezinye zingase zibe sína. Le miphumela ivame ukuba mnandi, kodwa abanye abantu bangase bazizwe becasukile futhi beqhaqhazela. Le miphumela ayikwazi ukuqhathaniswa nemiphumela emibi yemithi yendabuko. Ngaphambi kokuthi uthathe uwoyela we-cannabis, funda ilebula. Ngaphambi kokuthi udle noma yimiphi imikhiqizo ye-cannabis, thintana nodokotela wakho uma ungaqiniseki.
Ukuthembela kungenye yemiphumela emibi ejwayelekile ehlotshaniswa namafutha e-cannabis. Abantu abasebenzisa uwoyela abazi ukuthi aqukethe iTHC. Ukuze ugweme imiphumela emibi, kubalulekile ukuthi uqaphe ukuthi udla uwoyela ongakanani we-cannabis. Ukuze uhlale uphapheme, uzodinga inkomishi yekhofi ye-cannabis usuku ngalunye. Ngaphambi kokuthi uqale ukusebenzisa imikhiqizo ye-cannabis, thintana nodokotela wakho uma unesifo sikashukela.
Ukuthuthumela kungomunye umphumela ohlangothini lwamafutha e-cannabis. Ucwaningo lwakamuva lwamagundane lubonise ukuthi uwoyela we-cannabis uqukethe ama-cannabinoids. Amandla kawoyela we-cannabis ukunciphisa ukukhula komdlavuza wamaphaphu abonakalisiwe kulolu cwaningo. Akwaziwa ukuthi ikhona yini imiphumela emibi. Ngaphambi kokuyithatha njengomuthi, thintana nodokotela wakho.